Owayesakuba yiMfazwe yesibini yeHlabathi iNyukliya Bunker iyathengiswa eDevon - Ipropathi
Owayesakuba yiMfazwe yesibini yeHlabathi iNyukliya Bunker iyathengiswa eDevon
Abo bafuna ipropathi eyahlukileyo akufuneki bajonge phambili, njengoko inqabileyo yangaphambili ye-World War II bunker ikwimakethi eSalcombe, Devon, nge- $ 400,000.
Eyayisaziwa ngokuba yi-Hope Cove Bunker, esi sakhiwo sakhiwa ngurhulumente wase-Bhritane njengenxalenye yenkqubo ye-ROTOR-inkqubo ecacileyo ye-rada yokhuselo lomoya eyenza i-UK ibone uhlaselo olunokwenzeka ngabaqhushumbisi baseSoviet.
Ngomhlaba omninzi ekufuneka uphuculwe, ipropathi inamagumbi angama-56 ehlelwe ngaphezulu kwemigangatho emibini, iipaseji ezinde, amagumbi amakhulu, a ikhitshi , kunye neembono ezintle ezibonisa ubuhle eSalcombe. Isenokuba kukufuna ukulungiswa ngokupheleleyo, kodwa oku kunika abathengi ithuba lokubeka isitampu sabo kuyo.
'Ithuba elifana neli linqabile kakhulu kwaye linokubakho kwiindidi ezininzi zenguqu, utshilo uVikki Bennett, isithethi se-OnTheMarket.
Ime ezilalini ezinoxolo, abaniniyo yimizuzu nje evela elunxwemeni olukhazimlayo. Nokuba uyonwabela ukungxama ngeempelaveki okanye ukubhukuda kwamanzi abandayo, kuninzi kwindawo onokuyonwabela. Kananjalo oku, idolophu yaseSalcombe kwiindonga zeKingsbridge Estuary ineevenkile ezimbalwa, iivenkile zokutyela, ii-pubs, kunye neyona ice cream intle ngeenxa zonke.
UKatie Semmens, isithethi sikaClive Emson Auctioneers, uyongeza: 'Siyavuya ukunikezela ngepropathi enqabileyo. Kunzima ukutsho ukuba ngubani oyena mntu uza kuba ngumthengi, inokuba ingubani na ophuma kwezomkhosi ukuya kumnini-mhlaba. '
Izakhiwo zeCrown ngoku ziyathengiswa £ 400,000 kunye OnTheMarket . Ipropathi iyakuthengiswa ngefandesi, ke nxibelelana neearhente ngolwazi oluthe kratya.
Jonga ngeenxa zonke ...
Iibhentshi ezili-17 zokugcina ikhaya lakho licocekile kwaye licocekile
Ngaphakathi kumakhaya akuZoopla abonwa kakhulu ngo-2021 ukuza kuthi ga ngoku
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi kwee-2 izindlu zokuhlala ezidibeneyo ezithengiswayo eMzantsi Cornwall
Ukuqesha ngoku kubiza ixabiso eliphantsi kunokuthenga indlu
Iindawo ezili-10 ezingabizi kakhulu eLondon ukuthenga umzi Iidolophu ezili-15 kunye needolophu ezinegadi ezinkulu
Ingqungquthela ye-G7: Ukukhangelwa kwepropathi kabini eCarbis Bay Ngoku ungathenga umzi-mveliso wangaphambili wenqwelomoya
Amakhaya ama-5 athengiswayo awuyi kukholelwa ukuba ase-UK
Ipropathi edibeneyo iyathengiswa eDevon
Icawa eguqulweyo iyathengiswa eDevon
Ikhaya elingaphambi kwamanzi eDevon liyathengiswa
Jonga ngaphakathi kwesi sikhululo sikaloliwe sangaphambili siyathengiswa
Le ndlu yesikolo yakudweliso lweBakala II yakhiwa ngamaxesha eTudor
Thatha inkcazo ngaphakathi kwale ndlu yangaphambili yefama eDevon
IBakala II elidweliswe kwikhemesti yangaphambili ligcwele umtsalane
Isefu yokuhlambela amanzi
Eyona mibala ilungileyo yokulala 2015
Isiketi somthi weKrisimesi sanamhlanje
ingakanani imiphezulu yeetafile zegranite
yeyiphi imibala ehamba nengwevu